कृष–४ मा यामी - बलिउड - साप्ताहिक
कृष–४ मा यामी
ऋतिक रोशनद्वारा सुपर हिरोको भूमिका निर्वाह गरिएको चलचित्र ‘कृष’ निर्माण भएको ११ वर्ष पूरा भैसकेको छ । ऋतिकले ट्विट गर्दै कृषको चौथो श्रृंखलाको तयारी भैरहेको जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । यतिबेला ऋतिक उक्त चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम गर्दैछन् ।
यसबीच चलचित्र काबिलमा ऋतिकसँग अभिनय गरिसकेकी अभिनेत्री यामी गौतम कृषको यो नयाँ श्रृंखलामा प्रस्तुत हुने बताइन थालेको छ । यामीले समेत ट्विट गर्दै कृषको प्रशंसा गरेकी छिन् । यामीले ट्विटमार्फत ऋतिकमात्र नभै राकेश रोशनको समेत प्रसंसा गरेपछि कृष–४ मा उनले राम्रै भूमिका प्राप्त गर्न लागेको अनुमान गरिएको हो ।
आलोचना स्वभाविक हो
इन्स्टामा जोडिइन् ऐश्वर्या जेष्ठ १०, २०७५
प्रियंकालाई चाहियो यस्तो पति जेष्ठ ८, २०७५
किन यति उत्साहित धवन ? जेष्ठ ७, २०७५
जिरो फिगरको भूत जेष्ठ ६, २०७५
विपाशालाई चिट्ठा जेष्ठ २, २०७५
नरगिस कोसँग डेटमा छिन् ? जेष्ठ १, २०७५
अक्षयको नयाँ काम वैशाख ३१, २०७५
अमिताभको मन दुख्यो कि ? वैशाख २९, २०७५
विवाह गर्न चाहन्छन् धवन वैशाख २७, २०७५
समाको तस्बिरले तहल्का वैशाख २६, २०७५